Dhiirrigelinta cayaaraha shirkadaha: dulqaadka oo la hirgeliyey Diseembar 2019
Si loo dhiirigeliyo ku dhaqanka isboortiga shirkad, Dowladdu waxay dooneysay in howlaha isboorti ee lagu bixiyo shirkadda gudaheeda aan loo tixgelin faa'iido ahaan nooc ahaan.
Bishii Diseembar 2019, warqad ka socota Waaxda Amniga Bulshada ayaa sidaas darteed u dabcisay sharciyada ku saleysan tabarucaadka bulshada faa iidada ay ka dhalatay bixinta helitaanka qalabka isboortiga.
Dulqaadkan maamul kahor, kaliya howlaha isboortiga ee ay bixiyaan guddiga bulshada iyo dhaqaalaha ama loo shaqeeyaha, maqnaanshaha CSE, ayaa laga dhaafay tabarucaada xaaladaha qaarkood.
Maanta, adoo adeegsanaya dulqaadkan, waad ka faa'iideysan kartaa, xitaa haddii shirkaddaadu leedahay CSE, ka dhaafitaanka bulshada marka aad u fidiso shaqaalaha oo dhan:
helitaanka qalab u heellan fulinta howlaha isboortiga sida jimicsi ay leedahay shirkadda ama meel ay maamusho shirkadda, ama aad mas'uul ka tahay kireysiga; isboorti ama jimicsi jimicsi jimicsi mid ka mid ah goobahan.
Fadlan ogow in ka-dhaafitaankani aanu khusaynayn markaad maalgelinayso ama ka qayb qaadanayso khidmadaha shaqsi ahaanta ee rukunka ah ee ...
Ku dhiirrigelinta isboortiga goobta shaqada: ka-dhaafitaannada tabarucaadka bulshada ee uu qeexay sharciga maalgelinta Lambarka Bulshada ee 2021 July 10th, 2021Tranquillus
READ Macluumaad beero
hore2021 mushaharka ugu yar
socdaXaq miyaan u leeyahay in aan dib u dhigo wareysiyada xirfadeed sanadka 2021 aniga oo aan la i ganaaxin?
Ma dabagali karo hagaajinta shaqada ee la ii soo bandhigay shaqaale